“ Cudurkas Sars-ka Oo Hindiya Soo galay “
FAAFIN: APRIL 30, 2003
Cudurka saf mareenka ah Ee sars-ka ayaa markii ugu horeysay lagu arkay Nin 32 jir ah oo :Taksiila ah”(taxi-Driver) Dalka Hindiya magaaladda Pune. waxana la Sheegayaa in taksiilahaasi uu cudurkaa ka qaaday markii uu soo Kiraystay Nin Ganacsade ahi oo ka soo laabtay dalka Indonesia . ninkaas ganacsadaha ah oo markii la baadhay laga helay isna Cudurka Sars-ka
Magaaladda Ugu dadka badan Hindiya Ee “kolkata” oo hore loogu yeedhi jiray “ calcuta ” ayaa lagu soo waramayaa in laba qof in ka badan laga helay cudurkaasi warkan oo uu saaka qoray wargeyska Asian Age ee ka soo baxa Bombay Hindiya ayaa cadeeyay in cudurka sars-ku oo Khatar ku hayo magaaladda kolkata
Dr S.P. Agrawal oo ah agaasimaha Guud ee caafimadka Hindiya ayaa u Sheegay Saxaafadda madaxbanaan in lagu daweynayo Hospitaalka Delhi iyo Mumbai Dad looga Shaki Qabo Cudurkaasi.. waxanu haynaa ayuu yidhi agaasimuhu caalamada muujinaya cudurkan kuwaas oo ay ka mid yihiin xumadda iyo qufac.
Dadka Reer Hindiya ayaa qaatay haraaqaha yar yar e afka lagu xidho si ay iskaga ilaaliyaan neefta dadka cudurkaasi qaba . Shaqaalaha Diyaaradaha Hindiya Gaar ahaan kuwa Taga Shiinaha Thailand iyo Vietnam ayaa Shaqo Jaajin Bilaabay Shalay ka dib markii ay ka baqeen in uu cudurkaasi ay qaadan.. ganacsiga dalalkaasi Dhex mari jiray ayaa waxoogaa hakad galay cudurkaasi awgii.
Freelance journalist Pune India abdiaziz ahmed mousa
QORAALADII HORE EE CabdiAziz...GUJI